मेरिना Ishimbayevo - रूस महिला टिभी निर्देशकमा जानिन्छ, जो बन्द लोकप्रिय कार्यक्रम र कार्यक्रम चक्र को धेरै, साथै नाटकहरु को टेलिभिजन निर्माण गरे।
Ishimbayevo मेरिना Raufovna मई 29, 1951 मा एक बरु रचनात्मक परिवार मा, मास्को मा जन्म भएको थियो (आमा, Ishimbaeva Liliya Sergeevna र हजुरबुबा, ALEKSEEV Sergey Petrovich पनि थिए निर्देशक र हजुरआमा - Alexandra Zaks वेरा Bernardovna - थिएटर अभिनेत्री) ।
बुबा मारिनो - Ishimbay रउफ Shakirovich - केन्द्रीय सिनेमा घर को उप निर्देशक - एक कर्णेल र पछि थियो। पनि मेरिना Ishimbayevo गर्ने पाँच वर्ष लागि marina भन्दा हेलेन नाम बहिनी छ।
स्कूलमा केटी आफ्नो आमा को रचनात्मक पाइला मा जाने भनेर निर्णय, र 1968 मा, सत्र को उमेर मा, दोस्रो विद्यालय देखि स्नातक पछि, निर्देशकहरू को पाठ्यक्रम मा भर्ना। पनि भविष्यमा निर्देशक जहाँ त्यो, को पाठ्यक्रम, को निर्देशन विभाग मा अध्ययन गर्ने Shchukin स्कूल, स्नातक व्यवस्थित। 1984 मा marina स्नातक प्रदर्शन प्ले Anny Rodionovoy द्वारा सिर्जना गरिएको "हजुरआमा को संस्थान," थियो।
निम्न वर्ष मेरिना राज्य केन्द्रीय टेलिभिजन मा भर्ना। साथै, त्यो समाचार कार्यक्रम को सम्पादक को एक भाग रूपमा काम गरे। केही समय पछि एक सानो शिक्षा (विदेशी भाषाहरूको विभाग) र गैर-कल्पना मा अनुसन्धान कार्यक्रम संग प्रोफाइल परिवर्तन।
1978 मा Ishimbayevo मेरिना साहित्यिक र नाटकीय कार्यालय मा काम गर्न गए।
Ishimbayevo मेरिना सक्रिय उनको निर्देशन स्क्रिन लागि टेलिभिजन कार्यक्रम र टेलिभिजन, नाटकहरू र कथाहरू धेरै आए अन्तर्गत, टेलिभिजन मा गतिविधिहरु निर्देशन छ। सबैभन्दा टिभी मेरिना को प्रमुख एक जवान filmmaker रूप मा, 70s फिर्ता गर्न सुरु हुन्छ। तिनीहरूमध्ये:
धेरै समस्याहरू "Zucchini 13 कुर्सियों" कार्यक्रम।
साथै, दुई जो 1978 मा बाहिर आए र ते "हाम्रो घर" को बीसौँ वार्षिकोत्सव गर्न सीमित गरिएको थियो कार्यक्रम "जब हामी जवान थिए," को।
1979 मा, विश्व काम शीर्षक देखे "busybody, वा प्रकरण विजार्ड डर।"
को स्क्रीन मा अन्तिम शताब्दीको eighties मा यो निर्देशक को काम को एक सानो संख्या काम गरेन बाहिर। तिनीहरूलाई हुन्:
"शूटिंग। BELKIN "PN Fomenko 1981 मा मंचन।
त्यसै वर्ष उनले Chomsky द्वारा निर्देशित "कुरूप ELSA", प्रकाशित।
एक वर्ष पछि, एक "रोमियो र जूलियट" स्क्रिनमा, सेट ए वी Efrosa थियो।
द्वारा मंचन "Sorochintsy उचित" वी Smekhova 1985 मा प्रकाशित।
र 1988 मा उनले प्ले ए Torstensson संग "द Tempest" recreated।
पनि Shimbaeva मेरिना 1989 देखि एक चक्र मा काम "अभिनेता गरेको कथाहरू।"
Shimbaevoy निर्देशन टेलिभिजन कार्यक्रम:
"Fedota Streltsa बारे - यो साहसी जवान";
निर्देशक को काम मा 1990-2000-ई
1990 मा Ishimbayevo मेरिना काम आफ्नो ठाउँमा परिवर्तन, त्यो रूसी टेलिभिजनमा तातियाना Olegovna Pauhovoy, बस सृष्टि गर्नुभएको थियो जो छोडेर। त्यहाँ एक "Art'el" त्यो एक एकल प्रदर्शन, अलेक्जेन्डर Filippenko द्वारा "मृत प्राण" को टिभी संस्करण स्थापित छ। खैर, यो प्रदर्शन मा आफ्नो काम को लागि, अभिनेता राज्य पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
अब सम्म, टिभी च्यानल "संस्कृति" जो Ishimbayevo Pauhovoy र Yerofeyev संग संयुक्त प्रयासमा द्वारा सिर्जना "Apocrypha," भनिन्छ कार्यक्रम को एक श्रृंखला हो।
Grigory Gorin र बारेमा प्रसारण चक्र मा टी O. Pauhovoy संग Collaborated लियोनिद Filatov।
निर्देशक teledeyatelnost अन्त निर्णय र 1996 मा रूसी टेलिभिजन गए।
तर 1997 मा उनले छ फिलिमहरु कार्यक्रम Eldar Ryazanov र हस्तान्तरण संग को एक श्रृंखला "Yuriem Nikulinym, छह सांझ" शीर्षक गोली जहाँ च्यानल "Ren-टिभी" Irena Lesnevskaya निमन्त्रणा गरिएको थियो "सेतो सुगा को क्लब।"
मेरिना Ishimbayevo - निर्देशक, मात्र रूस मा छैन काम गर्ने, त्यो पनि नेदरल्यान्ड र जापान भ्रमण गर्नुभएको थियो।
भाग्यशाली उनको बी Pokrovsky सेट, अल्फ्रेड Schnittke द्वारा "मुर्ख संग जीवन" को शाही ओपेरा एम्स्टर्डम चरणबद्ध बन्द लिन।
पनि सोभियत र जोरजियन र्नतकी नीना Ananiashvili, ballets चक्र टोक्यो मा खिच्नुभयो Ishimbayevo जो संग collaborated।
मेरिना Ishimbayevo। व्यक्तिगत जीवन
कोसँग मेरिना छ वर्ष (1972-1978 वर्ष) को लागि बस्ने थियो उनको पहिलो पति, - Negrul Evgeniy Aleksandrovich - अष्ट्रेलिया मा सोभियत संघ दूतावास व्यावसायिक परामर्शदाता।
निर्देशक संग दोस्रो विवाह अझै पनि आज, मेरिना अभिनेता अलेक्जेन्डर Filippenko को पति थियो अवस्थित छ। 1985 मा जोडे, नाम थियो Alexandra एक छोरी थिए त्यो MGIMO स्नातक र यस समयमा zvukorezhisserskoy गतिविधि संलग्न।
जीवनी इवान Urgant - एक प्रसिद्ध रूसी showman, अभिनेता र संगीतकार
यो श्रृंखला "Kulagin र भागीदार": अभिनेता न्याय मा दर्शकहरु विश्वास फिर्ता
Finalist परियोजना भिक्टोरिया Maremukha "युक्रेनी-2 को सुपर मोडेल": उनको जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
अलेक्जेन्डर Semin: जीवनी र परिवार
ह्यान्ड्स स्थापना द्वारा हात: विवरण, चरण निर्देशन निर्देशन र सिफारिशहरु
कसरी आकर्षित गर्न? आफ्नो चरित्र: एक अद्वितीय वर्ण बनाउनको लागि निर्देशन
कोलेस्ट्रल lowering लागि अर्थ: Atoris (प्रयोग को लागि निर्देश)
भित्री र फर्नीचर बाल कोठा
व्यवस्थापन र हत्यारे सिद्धन्त-3 को खण्ड
चेरी संग चकलेट केक। सजिलो नुस्खा
कसरी लीख s को छुटकारा प्राप्त गर्न? उपयोगी आशय
पार्टी र यसको मूल्य को 20 औं कांग्रेस। "व्यक्तित्व सम्प्रदाय र यसको परिणाम" Nikity Hruscheva रिपोर्ट
महिला बढेको रात Sweats: कारण